Posted on February 26, 2020 March 3, 2020 by nay win aung
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ (ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ)မှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့နှင့်အတူ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ကျိုင်းတုံမြို့တွင် “ Electronic Monthly Implementation Reporting System Refresher Training ” ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး / ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာဦးမြင့်ကျော် မှ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားပြီး ဒေါ်မေမြတ်ထွန်း(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲမှ လုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းကို ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် သင်တန်းသို့တက်ရောက်လာကြသော သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများက... Read More | Share it now!
Posted on February 13, 2020 by Author 2
ကုသရေးဦးစီးဌာန ၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန မှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင် ဝန်ထမ်းများအား ( ၁၉ – ၁ – ၂၀၂၀ ) မှ ( ၂၄ – ၁- ၂၀၂၀ ) အထိ ( ၆ ) ရက် တိုင်အောင် Refresher Training များ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ smartsmart ... Read More | Share it now!
Posted on December 18, 2019 by nay win aung
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအားဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင် ဝန်ထမ်းများအား (၂၅-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ထိ (၃)ရက် တိုင်အောင် Refresher Training ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ... Read More | Share it now!
Posted on November 22, 2019 by Editor 1
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရှိ ငွေစာရင်းကိုင်ဝန်ထမ်းများအား ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ Khwe Ka Baung Motelတွင် (၁၃-၁၁-၂၀၁၉)မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉)ထိ (၃)ရက်တိုင်အောင် မွမ်းမံသင်တန်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ... Read More | Share it now!